WAA MAXAY SABABTA AAN BEERAHA BEERAHA IYO UBAXYADA U FURI KARIIMKA: SHARCIYADA DARYEESHA DHIRTA IYO GOORTA LA FILAYO UBAX? - GURI, GURI
Noocyada daryeelka ee beerta: sababta sababta dhirta uusan ubaxin iyo waxa la sameeyo si ay u muuqdaan muuqaalka korniinka?
Gardenia (Gardenia) warshad caddayn ah ayaa iska leh qoyska madder. "Cape Jasmine" waxaa sidoo kale loo yaqaan beerta. Qurxinta quruxda badan ee kulaylaha, sidaas awgeed daryeel ayaa loo baahan yahay si aad u fiican.
Beerta ubaxu waxay u muuqataa mid farxad leh waxayna leedahay hudheelo qurux badan oo xoog leh. Inta lagu jiro ubax, waxay u egtahay Rose.
Si aad u ilaaliso sida jilicsan iyo waqti isku mid ah quruxda yaab leh, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado runta ah ee geedi socodka ubax iyo xeerarka daryeesha warshad ornamental ah.
Muuqaalka muuqda ee beerta, oo ka dhigaya midka ugu cadcad ubaxlayaasha, waa baraf-cad ama ubax casaan leh, dibad ahaan, ugu badnaan, u eg midab-dhalasho ama qaab muuqaal ah oo ah xiddig lix-gees leh oo leh daboolan cufan ah. Inflorescences Terry iyo ubaxyo isku dhafan oo daboolaya afkoda. Iyadoo ku xiran kala duwanaanshaha, dhexroorka ubaxa waxay ku kala duwanaan karaan laba ilaa toban sintimitir..
Noocyada beeriyeyaasha qaarkood waxay leeyihiin midab jaalle ah oo tufaax ah, taas oo kala duwanaan karta nolosha dhirta, laga bilaabo caddaan marka ubaxu, ilaa laanteeda ka hor ubaxu hoos u dhaco.
Inflorescences Gardenia waxay u egtahay caro gaar ah.
Goorma iyo immisa budooyinkoodii?
Gardenia Blooms laga bilaabo May ilaa Ogosto. Ubaxku wuxuu socon karaa illaa lix bilood, laakiin waxay ku xiran tahay baaxadda duurka iyo tirada naasaha la sameeyay, kuwaas oo si kedis ah u bloom. Marar dhif ah, waxaa laga yaabaa in dib-u-barbardhigo dayrta qoto dheer.
Qol ka mid ah barkada waxaa ku jira, waa inaysan noqonin dhibco heerkulka ah.
Ciidda beerta sii kordhaya iyo ubaxeeda firfircoon waa inay ahaato mid acidic ah.
Waxaad u baahan tahay inaad ubax dhigto meel wanaagsan oo iftiin leh, laakiin maaha qorraxda tooska ah.
Marxaladda dhismaha budhka ah waa mid aan suurtagal ahayn in la furo ubax marka loo eego iftiinka iftiinka oo u wareejiyo meel ilaa meel.
Ubax dheer oo badan oo beerta ah wuxuu si toos ah ugu xiran yahay haddii ay leedahay iftiin ku filan. Warshadu waxay u baahan tahay iftiin fiican oo ku dhow saacad dhan. Waxaa jira qadar ku filan iftiinka daaqada koonfureed, laakiin raajooyin aad u dhalaalaya ayaa dhaawici kara ubax jilicsan. Xayawaanka waqooyiga ma aha mid ku habboon iyada, waxaa jira iftiin yar. Sidaa darteed, xulashada ugu wanaagsan ee meeleynta waa dhinaca bari ama galbeedka.
Heerkulka qaboobaha ee beertu waa inuu ka duwan yahay xagaaga. Wixii ubax badan iyo horumarinta xagaaga, ubaxa wuxuu ubaahan yahay heerkul ah +22 digrii, iyo bilaha jiilaalka, marka ay jirto naqshad firfircoon ee ubaxyada ku xiga, heerkulka waa in lagu hayaa gudaha +16 +21 digrii. Heerkulka kuleylka jiilaalka wuxuu gaabin doonaa geeddi-socodka nolosha ee geedka.
Wixii ubax guul leh ee beerta, waa muhiim in la ilaaliyo habka waraabinta. Inta lagu jiro muddada koritaanka firfircooni waa inay noqdaan kuwo badan, laakiin sida ciidda u dillaacaan. Xilliga dayrta iyo guga, waraabinta waa lagama maarmaan 2-3 maalmood ka dib marka ciidda la qalo. Xilliga jiilaalka, waraabinta ayaa yareysa. Nidaamka waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho biyo diirran oo diirran. Marka la eego in ciidda acidic loo baahan yahay koritaanka habboon ee beerta, dhowr dhibcood oo liin liin halkii litir ee dareeraha lagu dari karaa biyaha rusheeyaha.
Joogista qoyaan loogu talagalay geedaha kulaylaha waa mid aad muhiim u ah. Marxaladda gaduudka, dhirta ayaa loo baahan yahay in la buufiyo maalin kasta, ka dib marka la soo bandhigo ubaxa, buufinta ayaa la joojiyaa si aysan biyuhu u dhicin xayawaan jilicsan, laakiin isla markaa waa lagama maarmaan in la dhigo weel biyo ah oo ku xiga geedka.
Samaynta waxyaalo dheeraad ah ayaa saameyn aad u wanaagsan ku leh gobolka guud ahaan beerta, iyo awoodda ay u leeyihiin in ay gaaraan. Wixii bacriminta ku haboon oo ku habboon isku-daboolida ubaxyada guryaha.
Transplantation waa in la sameeyaa hab wakhti go'an, laakiin aad u taxadar leh, marka la door bido habka ku-meel-gaadhka. Nidaamka xididka geedka waa mid aad u jilicsan.
Wixii geedaha ka soo baxa ubaxyada ku guuleysta waxay u baahan yihiin manjooyin wakhti go'an, khafiifinta caleenta qaro weyn, iyo dhirta laga bilaabo ubaxyada la qalajiyey iyo caleemaha daciifka ah.
Aan ku filneyn ciidda oo dhan.
Biyaha adag ee waraabka.
Nidaamyada raad la'aanta.
Biyo joogto ah ee substrate ah.
Waxyeellada farsamooyinka ee burooyinkeeda.
Gardenia waxay u baahan tahay in lagu beeray kaydka ciidda si gaar ah loogu diyaargaroobo, waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa isku darka u diyaarsan ee loogu talagalay liinta ama shubanka. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro 1/3 ciid ah webiga si ay ciidda u siiso hawo fiican. Waa suurtogal in la gooyo ciidda ee koorsada waraabinta, hal mar bishii waxay ku daraysaa liin macaan si ay u dareeraan.
Si aad u jilciso biyaha, waxaad isticmaali kartaa jilciye gaar ah, ama diyaariyo diirada oo ah oxalic acid, ku dar 50 garaam oo acid ah halkii litir oo biyo ah. Fikradda soo dhalatay ayaa lagu daraa biyaha marka la barbardhigo hal shaaha halkii litir oo biyo waraab ah.
Bacriminta waxay kiciyaan ubax. Waa lagama maarmaan in la doorto kuwa ku jira qudaar badan oo aan ka badnayn 3-4% ee fosfooraska.
Waa in aynaan u oggolaan in dhulka uu qoyan yahay mar walba, dusha sare ee dhulku waa inuu qalalo. Haddii qulqulatadu ay tahay mid aad u caan ah oo marka lagu daro ubaxyada, geedka ayaa bilaabay inuu qudhmo, waxaad u baahan tahay inaad isla markiiba ku beddesho substrate cusub.
Ma jecla isbedbeddel fiiq ah ee habka heerkulka. Waa inaadan gelin windowsill-ka daaqada furan ama balakoonka. Heerkulka qaboobaha waa inuusan ka yarayn +15.
Warshadda waa in la marmariyaa qubeyska qubeyska, lagu buufiyaa hawada iyo meel u dhow weelka ubaxa leh biyaha.
Badanaa, beeriyuhu wuxuu ku dhacaa weerarada aphids cad iyo caarada caarada. Aphids soo geli qolka, sida caadiga ah, wada jir ah ubax ka soo dukaanka, dibna caarada caarada ayaa ku faafta geedka, kaas oo u soo baxaya hawada qalalan iyo heerkul aad u sareeya. Natiijada nolosha cayayaanka, horumarinta beerta ayaa joojisa, oo ay ku jiraan joojinta ubaxyada, haddii jirku uu noqdo mid baahsan, geedka ayaa u dhiman kara.
Si loo xaliyo dhibaatada, waxaa lagu daaweeyaa sunta cayayaanka.
Haddii beerta dheriga dhererkeedu hoos u dhacdo, ama qof uu si aan khatar ahayn u taabtay burooyinkeeda oo ay baaba'een, geedka lama beerayo. Quruxda kulaylaha waxaa loo tixgeliyaa in ay tahay wakiil qoto dheer oo ka mid ah firfircoonida, waxay u aragtaa saameyn kale oo dibedda ah sida walaaca daran.
Soo bixinta gudaha, beerta waxay noqotaa quruxda gudaha gudaha, oo abuuraya jawi ah qaab-dhaqameed iyo nimco. U hoggaansanaanta talooyinka sahlan oo ku saabsan mawduuca waxay u oggolaaneysaa geedka in uu u buuxiyo xoog buuxda, oo farxad leh milkiilaha qurxinta leh.